Car Blackbox အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၁၈၆ရက်​
ကားမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Video recorder
ကားတွေများလာတယ်။ ကားတိုက်မှုတွေ၊ ကားပွတ်မှုတွေလည်း
HD 720 ပါတဲ့ video recorder လေးကို ကားထဲမှာ တပ်ထားလိုက်ပါ။
ကားတစ်ခုခု ဖြစ်လို. ကိုယ်မှန်နေရင် video record လေး ရှိနေပါမယ်။
ကားရဲ. cigarette lighter လေးနဲ. အားသွင်းထားပြီး တစ်နေကုန် record
USB ကြိုးလည်း ပါလို. အိမ်မှာလည်း အားသွင်းနိုင်ပါမယ်။
2.4 လက်မ TFT
Video ထဲက feature တွေ အားလုံး မပါပါဘူး။
Micro Sd card ထည့်ပြီး အသုံးပြုရပါမယ်။
ဈေးနှုန်း – ၃သောင်း၅ထောင်
TOYOTA Belta Towing Cover
အမည်: Car Blackbox